विश्वकप छनोट – अर्जेन्टिना चिलीसँग रोकियो ! – Yuwa Aawaj
जेठ २१, २०७८ शुक्रबार 286
एजेन्सी : फिफा विश्वकप कतार २०२२ अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा अर्जेन्टिना बराबरीमा रोकिएको छ ।
शुक्रबार विहान भएको खेलमा अर्जेन्टिमा चिली १/१ गोलको बराबरीमा रोकेको हो ।
दुवै गोल पहिलो हाफमा भएको थियो । खेलमा अग्रता अर्जेन्टिनाले लियो । खेलको २४ औँ मिनेटमा कप्तान लिओनल मेसीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए । पेनाल्टी बक्समा लोउटारो मार्टिनेजलाई गुइलेर्मो मारिपानले
फल गरेपछि रेफ्रीले भिएआरको सहायता लिँदै अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी प्रदान गरेको थियो । ३६औं मिनेटमा साञ्चेजले गोल गर्दै खेललाई १–१ गोलको बराबरीमा ल्याए । एरानगुइजको लामो फ्रिकिकमा गारी मेडेलले उपलब्ध गराएको पासमा अनमार्क रहेका उनले सहजै गोल गरेको थिए ।
दोस्रो हाफमा दुवै टोलीबाट गोलको प्रयास भएपनि सफल हुन नसक्दा खेल बराबरीमा टुंगियो । अंक तालिकामा ब्राजिल लगातार चार जितसहित १२ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको अर्जेन्टिनाको ५ खेलबाट ११ अंक छ ।
तेस्रो स्थानको इक्वेइडरको ४ खेलबाट ९ अंक छ भने पाराग्वे ५ खेलबाट ७ अंक जोडेर चौथो स्थानमा छ। पाँचौ स्थानको उरुग्वेको पनि ७ अंक नै छ । चिली ५ खेलबाट ५ अंक जोडेर छैटौ स्थानमा रहेको छ ।
Prevबन्ने भयो नेपालको पहिलो यानसेतु विमानस्थल !
Nextनेपालमा आउने मनसुनी प्रणाली भारतको केरलामा पुग्यो ।